Kuqokwe abadlali be-KZN Academy | News24
Kuqokwe abadlali be-KZN Academy
isithombe: sithunyelweIqembu le 21-player elizomela iNingizimu Afrika.
ABAPHATHI besikole saKwazulu-Natal esiqeqesha abadlali bebhola esaziwa ngokuthi yi-KZN Academy bajabule ngendlela eyisimanga ngesikhathi bethola umbiko wokuthi abadlali ababili abebe ngaphansi kwalesi sikole ngo-2014 no-2015, uThabo Cele (20) waKwaMashu oqokelwe ukuba emele iNingizimu Afrika kwiqembu laba dlali be-U/20 emdlalweni wezwe lonke owaziwa ngokuthi yi-FIFA World Cup ozobe use zweni lase-South Korea ekupheleni kwale nyanga, noSandile Mthethwa (20) wase-Richardsbay oqokelwe ukuba ngaphansi kweqembu le-Orlando Pirates.
UThabo okuyimanje osezweni lase-Portugal udlalela iqembu i-Portuguese Football Giants kanti uSandile udlala ngaphansi kwesikwadi se-Olando Pirates.
UThabo uthe ukuqokelwa imidlalo emikhulu njenge FIFA World Cup kufana nephupho kuye kanti ungo wesibili kule sikole ukuqokelwa ukuba adlale kwi-FIFA.
USphephelo Sithole wasoLundi owaye ngaphansi kwe-KZN Academy waba ngomunye owaqokwa ngo-2015 ukuba amele iNingizimu Afrika kwiqembu lika-U/19 emdlalweni we-FIFA ezweni lase Chile.
UThabo uthe: “Ukumela iNingizimu Afrika noma ngabe ukuyiphi inhlangano noma ngabe udlala muphi umdlalo, kuyinto enkulu futhi encomekayo ngakho ukuba yingxenye yemidlalo ye-FIFA kube yiphupho elifezekile kimi. Ngisebenze kanzima kule minyaka eyedlule, futhi ngisazo qhubeka ngiziqeqeshe kanzima ukuze ngibe umdlali oqavile,” kusho uThabo.
“Ngithanda ukubonga bonke abaqeqeshi nabo bonke abantu abangilekelelile kule ndima yokudlala ibola, ikhakhulukazi abe-KZN Academy nomqeqeshi uMnuz Paulo Cardoso okunguyena ongenze umdlali engiwuye namuhla.”
Umphathi we-KZN Academy uMnuz Carlos Catalino uthe uzizwa ejabulile ngomvuso othole ilomdlali. “UThabo ungumdlali okhombisa ukukhuthala nokuzimisela kuyo yonke into ayenzayo ikakhulukazi ebholeni, ukuqokwa ukuba ayodlala kwi-FIFA kuwu mvuzo omuhle njengoba ebengumdlali obe sebenza kanzima yonke lemi nyaka. Nginesiqiniseko sokuthi uzokhombisa ithalente lakhe adlale ngokuzimisela eSouth Korea. Sikholelwa wukuthi lokhu kusa yisiqalo nje njengoba ezoba umdlali oqavile weqembu lase Ningizimu Afrika eminyakeni ezayo,” kusho uMnuz Carlos.
UThabo uzophinde abe yingxenye yeqembu le 21-player eliqokwe abe-Amajita ngaphansi komqeqeshi uMnuz Thabo Senong elizomela iNingizimu Afrika ezweni lase Japan ngo mhla ka-21 kuNhlaba, ezweni lase-Italy ngo mhla ka-24 kuNhlaba nase zweni lase-Uruguay ngo mhla ka-27 kuNhlaba.
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngoThabo Cele xhumana no
Gugu Marawa enombolweni ethi: 082 992 2662.
ABAPHATHI besikole saKwazulu-Natal esiqeqesha abadlali bebhola esaziwa ngokuthi yi-KZN Academy bajabule ngemdlela aeyisimanga ngesikhathi bethola umbiko wokuthi abadlali ababili abebe ngaphansi kwalesi sikole ngo-2015 no-2014, uThabo Cele oneminyaka (20) noSandile Mthethwa (20) baqokelwe ukuba mebemele iNingizimu Afrika kwisiba kwiqembu labadlali be-U/19 emdlalweni wezwe lonke owaziwa ngokuthi yi FIFA World Cup ezweni lase-South Korea ekupheleni kwalenyanga..
UThabo Cele usezweni lase-Portugal udlalela iqembu i-Portuguese football giants kanti uSandile udlala ngaphansi kwesikwadi se-Olando Pirates.Usandile uthe ukuqokelwa imidlalo emikhulu njenge FIFA World Cup kufana nephupho kuye. Usandile ungowesibili kule sisikole ukuqokelwa ukuba adlale kwi-FIFA.
USphephelo Sithole wasoLundi owayengaphansi kwe-KZN Academy waqokwa ngo-2015 ukuba amele iNingizimu Afrika kwiqembu lika-U/19 emdlalweni we-FIFA ezweni lase Chile.
UThabo uthe ukudlalela imidlalo yang omhlaka 20 kuNdasa kuya ku-11 kuNhlangulana kuyi phupho kuye.
Uthe: “Ukumela izwe lakho noma ngabe ukuyiphi inhlangano noma ngabe udlala mupohi umdlalo kuyinto enkulu futhi encomekayo ngakho ukuba yingxenye yemidlalo ye-FIFA kuyi phupho kimi. Bengisebenza kanzima kule minyaka eyedlule futhi ngisazoqhubeka ngiiziqeqeshe kanzima ukuze ngibe umdlali oqavile,” kusho uThabo.
uqhube wathi: “Ngithanda ukubonga bone abaqeqeshi nabo bonke abantu abangilekelelile kule ndima yokudlala ibola, ikhakhulukazi abe-KZN academi nomqeqeshi uMnuz Paulo Cardoso okunguyena ongenze lo mdlali engiwuye namuhla.”
Umphathi we-KZN Academy uMnuz Carlos Catalino uthe uzizwa ejabulile ngomvuso othole ilomdlali. “UThabo uhlezi engumdlali okhombisa ukukhuthala nokuzimisela kuyo yonke into ayenzayo ikhlaukazi ebholeni futhi ukuqokelwa ukuba ayodlala kwi-FIFA kuwumvuzo omuhle futhi njengoba ebengumdlali obe sebenza kanzim yonke lemi nyaka. Nginesiqiniseko sokuthi uzokhombisa ithalente lakhe adlale ngokuzinisela eSouth Korea. Sikholelwa wukuthi lokhu kusa yisiqalo nje njengoba ezoba umdlali oqavile weqembu lase Ningizimu Afrika eminyakeni ezayo,” kusho uMnuz Carlos.
UThabo uyingxenye yeqembu le 21-player eliqokwe abe-Amajita ngaphansi komqeqeshi uMnuz Thabo Senong ebethe elizomela iNingizimu Africa ezweni lase ngomhla ka Japan 21 kuNdasa, ezweni lase-Italy mgomhla ka-24 kuNdasa nase zweni lase-Uruguay ngomhla ka-27 kuNdasa.
Umauthanda ukwazi kabansi ngoThabo Cele xhumana no
Gugu Marawa enombolweni ethi:
082 992 2662 nnoma kwikheli le email elithi gugu.marawa@gmail.com noma uye kwi page le website elithi-